News | Minister
News | Tag: Minister
इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिदै सुदूरपश्चिमका मन्त्रीहरु
काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट इन्धनबापतको रकम बुझ्ने मन्त्रीहरूले गाडीमा भने मन्त्रालयको कुपनबाट तेल हाल्ने गरेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकी समकक्षीलाई भेटेपछि...
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओसँग यसैसाता भेटवार्ता गरे । त्यसपछि नेपाली राजनीतिक/कूटनीतिक वृत्तमा एउटा बहस आरम्भ भएको छ । अमेरिकी नीतिमा नेपालको प्रवेश रहर कि बाध्यता ? यो प्रश्न सतहमा आएको छ ।
हेलिकप्टर राष्ट्रपतिलाई होइन, विदेशी अतिथि र प्रकोपका बेला उद्धारका लागि
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भर्खरै डेढ अर्ब लागतमा किनिएको हेलिकप्टर राष्ट्रपतिका लागि नभई विदेशी अतिथि र प्रकोपका बेला उद्धारका लागि प्रयोग हुने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले हेलिकप्टर किन्न अघिल्लो वर्ष साउन १३ गते नै रक्षा मन्त्रालयले स्विकृति दिएको बताए।
मन्त्रीहरुबाट यसरी राज्यकोषको दोहन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’को नारा दोहोर्‍याइरहेका छन् । तर, उनी नेतृत्वका २४ मध्ये २३ मन्त्री र राज्यमन्त्रीले इन्धनमा समेत भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार इन्धन खर्च लिइरहेका उनीहरूले मन्त्रालय वा मातहतका कार्यालयबाट तेल हालिरहेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री तथा वनमन्त्रीलाई प्रहरीले चेकिङ गरेपछि...
काठमाडौं । कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमणमा केही कडाई गरिएको छ । तर, मन्त्रीहरुलाई कसले लगाम लगाउन सक्ने ? हरेक हप्ताजसो मन्त्रीहरु विदेश भ्रमणमा गइरहेका हुन्छन् । आइतबार मात्र दुई मन्त्री एकैपटक विदेश भ्रमणमा गए । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र वन मन्त्री शक्ति बस्नेत । आइएनजिओको एक गोष्ठीमा भाग लिन थाइल्याण्ड गएका थिए ।
गृहमन्त्रीमाथि अर्को दबाब
काठमाडौं । दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल झन् झन् दबाबमा पर्दै गएका छन् । निर्मला पन्त प्रकरणमन चरम अलोकप्रियता कमाएका बादलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब समेत बढ्दै गएको छ । खासगरी अहिले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास र शरणर्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यालयले उनीमाथि दबाब दिइरहेको छ ।
मन्त्री नटेर्ने सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा
काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरमले सम्हालेका दुवै मन्त्रालयका सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरी र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तानिएका हुन् ।
स्याङ्जा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई मातृशोक परेको छ ।